Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga SL oo Dalka Qadar kaga qayb galay shirka Caalamiga ah ee Horumarinta Barriga Dhexe oo ay ka soo qayb galeen 70 wadan. |
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga SL oo Dalka Qadar kaga qayb galay shirka Caalamiga ah ee Horumarinta Barriga Dhexe oo ay ka soo qayb galeen 70 wadan.
Hargeysa(GNN) Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Somaliland Maxamed Shugri Jaamac ayaa Dalka qadar kaga qayb galay shir Caalami ah oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiinta Toddobaatan Dal, kaasoo ay khudbado ka jeedinayaan madax ay ka mid yihiin Madaxweynihii hore ee Dalka Maraykanka Billl Clinton iyo Xoghayihii hore ee Jaamacadda Carabta Camar Muusa.
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Xarunta Horumarinta Barriga Dhexe (UCLA) waxa uu si rasmi ah u furmay shalay o ay taariikhdu ahayd 11/5/2015-ka waxaanu socon doonaa muddo sadex cisho ah, waxaana lagaga hadlayaa sdii loo qiimayn lahaa Horumarka barriga dhexe,isla markaana loogu dajin lahaa mustaqbalka qorshe cad oo kor loogu qaadayo waxyaabaha ka dhiman.
Shirkan oo ah mid caalami ah waxa si rasmi ah shalay u furay Raysal Wasaaraha Dalka Qadar,isla markaana ah wasiirka Arrimaha Dibeda, waxaanu soo dhaweeyey wufuuda iyo madaxda kala dawan ee ka soo qayb gashay shirka, isagoo ugu baaqay inay ka soo saaraan go’aamo midho dhal ka dhiga sidii barriga dhexe horumarkiisa looga qayb qaadan lahaa.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Somaliland oo ka mid ah madaxda sida rasmig ah loogu soo casuumay shirkaasi ayaa sheegay in si diiran loogu soo dhaweeyey, isla markaana uu kulan gaar ah la yeelan doono dhamaadka shirka Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Dalka Qadar, kaasoo uu kala hadli doono sidii loo xoojin lahaa Xidhiidhka ganacsi ee Barriga Dhexe iyo Somaliland.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Somaliland waxa uu sheegay in ka qayb galka shirkan caalamiga ah fursad u yahay guud ahaan Somaliland oo si gaar ah loogu soo casuumay iyo gaar ahaan Ganacsatada Somaliland oo sida ka muuqata martiqaadka ay ka heleen Xarunta Horumarka Barriga Dhexe ay tahay talaabo yididiilo galinaysa Somaliland.
Shirka ka socda Qadar waxa kaloo ka qayb galay Raysal wasaaraha Somaliya, kaasoo ka jeediyey khudbad ku qotonta xidhiidhka iyo horumarka Barriga Dhexe.